Bisha Ramadaan ku Afur Cunto Caafimaadleh iskana ilaali Cunooyinka Saliida ku badantahay(Baro Cuntooyinka Fiican ) | waamonews
Wednesday, June 1st, 2016 | Posted by editor
Waxaa fooda inagu soo hayaa bishii barakeysneed ee Ramadaan, Ilaaheey nabad hanagu gaarsiiyo hana naga dhigo kuwa Acmaashooda laga Aqbalo .
Walaalaha Muslimiinta gaar ahaan kuwa Soomaaliyeed waxaan doonayaa inaan idinku baraarujiyo ,inaan il gooni ah ku eegno Caafimaadkeena iyo Cuntooyinka aan ku Afureyno.
Bisha Barakeysan ee Ramadaan waxaa wanaagsan in la iska ilaaliyo Cuntada Saliida ku badantahay ama la shiilay ee lagu Afuro ,Sida Saambuuska ,Burka, Baajiyaha ,Mashmashka iyo waxii lamid ah ee Soo raaca ee Saliida ku badantahay. Waxyaabaha burka ka sameeysan ee hadana Saliida lagu shiilay waxaay dhaliyaan Caafimaadaro aad u weyn. Soomaaliduna aad ayay u isticmaalaan Xilliyada Soonka Cunooyinka Burka laga Sameeyo ee Saliida ku badantahay.
Muddoyinkan dambe dadka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa Qurbaha ku nool waxaa ku soo batay oo ay inta badan u dhintaan Xanuunka Kansarka ee ku dhaca Beerka, Sidoo kale Xanuunada kale uu ku soo bate waxaa kamid ah, Gaastiriga(Gastric),Kelyaha oo fariista, Sonkoroowga, Dhiikarka,cholesterol,Stroke-ga iyo waxii lamid ah.
Dadka Soomaalida waxay kamid ahaan jireen dadka dunida ugu caafimaadka badan, hadaba xanuunadan ku soo batay gaar ahaan kuwa ku dhaca unugyada muhiimka ah sida Beerka iyo wadnaha waxaa Sabab u ah Dufanka badadan . Dufanka beerka wuu wasaqeeyaa oo wuu dilaa, Sidoo kale dufanka Wadnaha xididka dhiiga u gudbiyo ayuu xiraa, kadibna xanuunka cholesterol ayaa kugu dhici ama Stroke oo wadnaha ayaa ku istaagi waa khatar halis badan. Milixda iyo Sonkorta iyaguna waa in la iska yareeyaa oo aan la isticmaalin jirkaaga intuu u baahanyahay wax ka badan, waxaay dhaliyaan Caafimaaddaro aad u weyn.
Marka walaalayaal ka fikira Calooshaada oo maalinki oo dhan baahneyd hadaad ku Afurto Cunto Saliida ku badantahay iyo waxyaabaha la shiilay ee burka ka sameeysan ???.Xanuun kasta ayaad halis ugu jirtaa, Gaastirig ayaa kugu dhici, beerka ayaad beeli,Caloosha ayaa ku istaagi, xitaa waxaa kugu adkaani inaad tukato Salaada Taraawiixda, oo waad dawaqi.
Cuntada ku wanaagsan in lagu Afuro.
Biyo Cad iyo Timir, Shurbada Boorashka laga Sameeyay, Aaad bay ugu wanaagsantahay Caloosha, oo boorashka waxuu deg deg ku soo celiyaa nafaqadii jirkaaga ka baxday, Timirta waxay deg deg u soo celiysaa sonkorta wanaagsan ee jirka u baahanyahay.Boorashka waxuu nadiifiyaa Beerka,wadnaha,waxuuna socodsiiya Caloosha.
Waxyaabaha Qudaarta iyo Fruit ka aad u cun, Maxaa yeelay jirkaaga ayay wax tar u leeyihiin waxaadna ka heli Vitamino badan.
Intaas kadib Cuntooyinka kale ee aad cuneyso waa in ay ahaadaan kuwa dufanka aad ugu yaryahay, oo aad ka heleyso Protein ,Hilibka, digaaga iyo Kaluunka dhamaantood si wanaagsan oo Caafimaadka ku jiro u karso, Laakiin marna Saliid badan haku shiilin, Grill ka ama Oven ka ku dubo, ama si kaleba u karso.
Bariiska Somalida Saliida ayay aad ugu radiyaan, waa Caafimaadaro, waxaa wanaagsan in biyo oo keliya lagu kariyo, Sidaas ayuu ku fiicanyahay Khaasatan xilliga Ramadaanka. Adigoo Saliida iska Ilaalinaya ayaad karsan kartaa Cunto aad u maxaan oo hadana fudud isla markaasina Nadiif ah . Sidoo kale Cuntooyinka Ramadaanka waxaa wanaagsan in Xawaashyada laga yareeyo si Caloosha Gaaska badan looga ilaaliyo, Xawaashyada badan waxaay kiciyaan stomach acid -ka , Mana loo baahno.
Saxuurta: Cuntada ugu fiican ee lagu Saxuurto waa Qamadiga ama Sareenka sidaad u taqaanaan. Waa Cunto Culus oo maalinki oo dhan Gaajo ma dareemeysid waana Caafimaad dhan kasta. Sareenka waxuu dhisaa lafaha, Sidoo kale waxuu buuxiyaa labatooyinka sida Jilbaha lafta dhabarka Dhareerka ka dhamaada, Aad buu u fiican yahay in lacuno Ramadan iyo markastaba.
Biyaha Cad Cabitaankooda hala badsado, Casiirka ha laiska yareeyo, haduusan aheyn mid aad adiga shiidatay oo qudaarta aad ka sameysatay.
Cuntada Ramadaanka in la cuno Fiican hoos ka eeg.
Grilled chicken fillet with salad
Iska daaya Cuntada Saliida badan ee la shiilay, waxaa laga qaadaa Xanuuno badan khaasatan xilliga Ramadaanka, Calooshaada oo gaajeeysan ha ku ridin Cunta Saliidleh. Is barbar dhig Muuqaalkan hoose iyo Cuntooyinka aan kor ku soo xusnay , maha wax la isku doorsan karo kan hoose waa xanuun.
Waxaan idin leeyahay ilaaheey Ramadaanka nabad hanagu gaarsiiyo hana naga Aqbalo Acmaasheena hana la isa soo Cafiyo ,walaalaha Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan idiin rajeeynayaa Nabadgelyo iyo dalkeena oo nabad noo noqda Amiin.
3 Responses for “Bisha Ramadaan ku Afur Cunto Caafimaadleh iskana ilaali Cunooyinka Saliida ku badantahay(Baro Cuntooyinka Fiican )”
abkow libaax says:
waad mahadsantihiin warbixintaan qiimaha badan ee aad noosoo gudbiseen. marka xigta waxaa idinka codsanaayaa inaad news update ka badisaan. akhbaraatka soomaaliya ka dhacaaayo wax inooga qora! mahadsanidiin!
Mahadsanid Walaal Cali Yare-
masha alaah kheyr alaha kaasiiyo cali yare walaal ramadan kariim